Akụkọ - Mgbụsị akwụkwọ Mgbụsị akwụkwọ Maka Stlọ Akwụkwọ na-aghọ aghụghọ na 2020
N'etiti-Mgbụsị akwụkwọ Conversazione Maka College Studuent na 2020
Na Septemba 29, 2020 Jitai Electronics Co., Ltd nwere a Mid-mgbụsị akwụkwọ Coversazione maka ụmụ akwụkwọ kọleji na 2020 nke ahụ bụ otu ụdị tradiji dị mma na ụlọ ọrụ m ma nye ohere ịmalite onwe ha ndị sonyere ụlọ ọrụ ahụ. Ka ọ dị ugbua ọ bụkwa ebe ikpo okwu maka mmadụ niile ịkpa agwa onwe ya. Ngụkọta nke ụmụ akwụkwọ kọleji iri anọ sitere na ngalaba dị iche iche sonyere na Mid-mgbụsị akwụkwọ Conversazione.
Ọdịnaya nke nzukọ a bụ ebumnuche na echiche sitere n'aka Jack Ma, onye guzobere Alibaba "onye nwere mmetụta uche, onye nwere ọgụgụ isi, onye nwere obi ụtọ" yana "mmetụta na-ekpebi akara aka" "ọnọdụ na-ekpebi akara aka". Studentsmụ akwụkwọ kọleji nọ na ụlọ ọrụ anyị na-ekwu okwu dabere na nghọta ha.
Ndị bịara na mkparịta ụka ahụ ji ya kpọrọ ihe ma mee nkwadebe zuru oke karịsịa ụfọdụ ụmụ akwụkwọ kọleji na-eto eto ma jiri obi ike kwuo echiche nke ya. Ndị ụlọ ọrụ enyochala ihe niile kwuru na ọ bụ otu n'ime ihe ndabere maka ịnye ọrụ, nkwalite ụgwọ ọnwa, nhọrọ dị elu na okike kachasị mma.
Na nso nso nke mkparịta ụka a, Jun Ma, onye isi oche nke ụlọ ọrụ anyị kwubiri na nnọkọ nke ahịa n'èzí na 2020 dị mma, usoro zuru oke zuru oke, mana ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ ndị siri ike ma chee ọtụtụ nsogbu na nsogbu ihu ihu ka m wee chọọ. ndị okenye niile na-eto eto na ụmụ akwụkwọ kọleji ọhụrụ gara n'ihu na-egwu talent gị ma na-etinye ihe ọmụma na ahụmịhe na-atọ ụtọ nke ọrụ ma ka na-agbakwunye usoro ọrụ ha nke ọma iji na-ebute okwu ogwu na ịrapara n'ihe mgbaru ọsọ gị ma ghara ịhapụ ịga mee ngwangwa inweta ebumnuche mmepụta nke ụlọ ọrụ anyị na 2020 site na mbọ na mgba. N'otu oge ahụ achọrọ m ka unu niile nwee obi ụtọ na ezumike na ezinụlọ nwere obi ụtọ. N’ikpeazu O nwere olile anya na onye obula nwere ike nweta oganihu na oganihu n’ime ulo oru.
Site na mkparịta ụka a, ọ bụghị naanị maka ụmụ akwụkwọ kọleji na-eto eto ịchọpụta ibe ha, mee ka mmetụta ibe ha nwekwuo n'elu ikpo okwu, kamakwa mee ka ntụkwasị obi na mkpebi ha gbanye mgbọrọgwụ na ụlọ ọrụ ahụ.